गल्कोट समाज जापान क्षेत्रीय समिती ओसाकाको अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा शिवु थापा ! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण ११, शुक्रबार १९:३१	Top News, थप समाचार
रिस्मेली मेघराज, जापान २०७५ साउन ११ । ओसाका जापान जापानमा बाग्लुङ्ग र खासगरी गल्कोटका समुदायहरुको बिभिन्न सहयोगी संघ संस्थाहरु लामो समयदेखि समाज सेवामा लाग्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले भुइचालो पीडित देखि लिएर स्कुल, अस्पतालहरुमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका छन् । बिदेशमा रहेर आफ्नो देशको गाँउ र मातृभूमिका लागि उनीहरुले गरेको योगदान र देश प्रतिको मायाको कदर सबैले गर्नै पर्दछ । जापानमा धेरै सामाजिक संघ संस्था छन । यस मध्य एउटा हो जापानमा क्रियाशील संस्था ‘गल्कोट समाज जापान।’ यो संस्थाले पनि मातृभूमिको लागि लामो समयदेखि धेरै सहयोग गर्दै आएको छ । सोहि सामाजिक संस्था गल्कोट समाज जापान क्षत्रिय समिति कान्साई ९ओसाका०को चौथो अधिबेशन सम्पन्न भएको छ।
जंगली च्याउ खाँदा तमानखोलामा एक जनाको मृत्यु, एक जनाको अवस्था गम्भीर !
२०७६ श्रावण २५, शनिबार १९:१५
बिहुँकोट समाज जापानले ओशाका र टोकियोमा तीज धमाका २०७६ को भव्य आयोजना गर्दै !